फ्लोरमा “पोइ पर्‍यो काले”FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फ्लोरमा “पोइ पर्‍यो काले”
फिल्मी फण्डा । कमेडी जनरामा निर्माण हुन लागेको फिल्म “पोइ पर्‍यो काले”को छायाँकन सुरु भएको छ । बुधबार (जेठ १५ गते) बाट फिल्मको छायाँकन पोखराबाट सुरु भएको छ । बुधबार बिहान पोखराको बिन्दबसिनी मन्दिरमा पूजा गरेर फिल्मको छायाँकन सुरु गरिएको छ । फिल्ममा आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, श्रृष्टि श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, सोहित मानन्धर, सुरक्षा पन्त लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
रघु परियार र किरण नेपाली कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मका प्रस्तुतकर्ता श्यामबहादुर थापा हुन् । शिशिर राणाको निर्देशन रहने फिल्म रेड बर्ड प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्माण हुँदैछ । फिल्ममा दिनेश महतको कथा तथा पटकथा रहेको छ । दिपक मनाङ्गे निर्माता रहेको फिल्ममा पुरुषोत्तम न्यौपाने र शिव गौतमको संगीत रहने छ । शिव ढकालको छायांकन रहने फिल्ममा कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने र रविन शाहको कोरियोग्राफी रहने छ । फिल्म आगामी तिहारको छेको पारी कात्तिक ८ गते बाट रिलिज हुने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : वर्षालाई विहे गर्ने रहर ?
फिल्मी फण्डा । नायिका वर्षा शिवाकोटी आफ्नो असन्तुष्टि र अभिव्यक्त गर्न मन लागेको कुरा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्छिन् । उनी बारे आइरहेका गसिपबारे होस् या फिल्मकर्मीको सम्बन्धका बारेमा होस् आफ्नो कुरा समाजिक सञ्जालमा नै राख्छिन् ।
हालै उनले रहर भन्ने क्याप्सन सहित एक फोटो अपलोड गरेकी छिन् । फोटोमा वर्षा साडीमा सजिएकी छिन् । उनले पोते लगाएकी छिन् र सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी छिन् । सिन्दुर र पोते विहे पछि हिन्दु नारीहरुले लगाउने गर्दछन् । वर्षा अहिले अविवाहित छिन् ।
उनले कहिले आफु कसैको गर्लफ्रेण्ड नभएको त कहिले एक्लोपनकनको साथि पेप्सी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्छिन् । विहे पछिको पहिरनमा सजिएर रहर भन्नाले विहेको रहत त हो नि, की कसो ?